QANDA အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（24.9MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် QANDA: Free Math Solutions
your သင်၏သံသယများကို QANDA တွင်ဖြေရှင်းပါ။ ✨
အိမ်မှုကိစ္စများသို့မဟုတ်တာဝန်များလှည့်စားခြင်းရှိပါသလား။ ACT / SAT စာမေးပွဲအတွက်လေ့လာနေပါသလား။ အိမ်စာကိုယခုပင်လိုအပ်ပါသလား။
QANDA သည်သင်လိုအပ်သောလွယ်ကူသောဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတည်းသာရိုက်ကူးပါ။ QANDA သည်သင်၏စက္ကန့်ငါးစက္ကန့်ကိုအခမဲ့ဖြစ်သည်။
detailed အသေးစိတ်ဖြေရှင်းချက်များလိုအပ်ပါသလား။ အခြေခံသင်္ချာမှသည်ကဲကုလအထိကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဂဏန်းတွက်စက်သည်သင့်အားဂရပ်နှင့်အတူအဆင့်ဆင့်ဖြေရှင်းမှုများကိုချက်ချင်းပေးသည်။
more ပိုမိုလေ့လာလိုပါသလား။ ထိပ်တန်းကျောင်းမှကျူရှင်ဆရာများကိုချက်ချင်းမေးမြန်းပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းဖြေရှင်းချက်များရနိုင်သည်။
နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်မှမူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းသား ၁၀ သန်းကျော်ရွေးချယ်သောအိမ်စာအက်ပလီကေးရှင်းကိုစမ်းကြည့်ပါ။
အိမ်စာနှင့်ရုန်းကန်နေရလား။ ၅ စက္ကန့်အတွင်း and ဓာတ်ပုံနှင့်ရှာဖွေမှုအဖြေကိုသာရိုက်ယူပါ။
(ထိုအရာသည် ၁၀၀% အခမဲ့ဖြစ်သည်!)
အရာရာကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရန်မလိုအပ်ပါ။ ယခု QANDA တွင်အားလုံး။ the 🧪📊🌎🎨
အက္ခရာသင်္ချာ၊ ဂဏန်းတွက်ချက်ခြင်းသို့မဟုတ်ညီမျှခြင်းပြwithနာများနှင့်အတူတွယ်ကပ်နေပါသလား။ သင်္ချာညီမျှခြင်းကိုဖမ်းယူပါ။ QANDA သည်သင့်အားအဆင့်ဆင့်ညွှန်ကြားချက်များစွာပေးလိမ့်မည်။
1: 1 အထိန်းများနှင့်အဖြေများ
အဖြေမရနိုင်ပါလား။ ပိုမိုလေ့လာလိုပါသလား။ ၁။ ၁ မေးခွန်းများကိုအရည်အချင်းပြည့်မီသောအထက်တန်းကျောင်းသားများထံတိုက်ရိုက်ချက်ချင်းမေးပါ။ ၁း၁ မေးခွန်းနှင့်အဖြေများတွင်ရူပဗေဒနှင့်ဓာတုဗေဒအပါအ ၀ င်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာမေးခွန်းများအားလုံးကိုသင်မေးနိုင်သည်။ calc
•အခြေခံသင်္ချာ / ကြိုတင်အက္ခရာသင်္ချာ - ဂဏန်းသင်္ချာ၊ အချိုးကျ၊ ကိန်းဂဏန်းများ , အပိုင်းကိန်း, ဒdecimalမကိန်း, အင်အားကြီးများ, အမြစ်များ, အချက်များ, ရှုပ်ထွေးသောဂဏန်း
algebra: linear ညီမျှခြင်း / မညီမျှမှု, quadratic ညီမျှခြင်း / မညီမျှမှု, ယေဘုယျ polynomial ညီမျှခြင်း, ညီမျှခြင်း / မညီမျှမှုစနစ်များ, လော်ဂရစ်သမ်, လုပ်ဆောင်ချက်များကို, ပုံ, polynomials
Trigonometry / Precalculus: ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ လော်ဂရစ်သမ်လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ထပ်ကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ trigonometric functions များ။ ။ ။ ကဲကုလ - စီးရီး၊ ကန့်သတ်ချက်များ၊ အနကျအဓိပ်ပါယျ, သမာဓိ။ •စာရင်းအင်း: ပေါင်းစပ်ခြင်း, permutation, factorials
အင်္ဂလိပ်, စပိန်၊ ကိုးရီးယား, ဂျပန်, ဗီယက်နမ်, အင်ဒိုနီးရှား, ထိုင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုသိရန်နှင့်ကျောင်းသားများ၏ပညာရေးကြိုးပမ်းမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးအထောက်အပံ့ပေးလိုသောအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းစိတ်အားထက်သန်ပါသည်။ တိုးတက်အောင် QAND A ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ဘာအသစ်လဲ QANDA: Free Math Solutions 5.1.09
[Qanda] Free Math Solution
How to get free mathematics solutions from qanda app. | MD TALKIES
Qanda Maths Solver App Part-2 Complete Detail of the app #letsthinks #QandAmathsolver
[Qanda] Doubt Solving in5Seconds!
QANDA: Instant Math Helper 5.1.06
QANDA: Free Math Solutions 5.1.00